tora siriusxm yemahara kune yako ios kana Android chishandiso kuburikidza may 15
Kuru Nhau & Ongororo Tora SiriusXM yemahara yako iOS kana Android chishandiso kuburikidza naMay 15
Ipo iwe & apos; takabatirira pamba kuyedza kuzvivaraidza kana kutsvaga nhau dzichangoburwa nezve COVID-19 kubuda, satellite satellite Provider inopa SiriusXM iri kupa vashandisi veIOS neApple mahara kunyorera kuburikidza naMay 15th. Dzinopfuura mazana matatu mageji anowanikwa aine mimhanzi, nhau, hurukuro yemitambo, komedhi uye zvematongerwo enyika (uye dzimwe nguva mitsara iri pakati pevaviri vekupedzisira yakasviba). Iyo SiriusXM & apos; steam yemahara 'inopa haina & apos; haidi kiredhiti kadhi rechikwereti kana kuzvipira kuve unobhadharira unonyorera pasi pemugwagwa.
Chiziviso ichi chakaitwa na 'Shock Jock' Howard Stern, ari kutepfenyura kubva kumba mazuva ano. SiriusXM CEO Jim Meyer akati, 'Nevanhu vazhinji vakakumbirwa kuti vagare pamba, tiri kuita yedu yakazara yekushambadzira mutsara wemimhanzi, varaidzo, nhau, neruzivo zviwanikwe nyore kune wese munhu. Mumazuva ari kumberi, tinovimba iyo & apos; sosi yakakosha yeruzivo kana kutsausa, musanganiswa une rupo wezvinhu zvitsva zviripo, uye sosi yekushamwaridzana iyo inouya kubva kune veMashopu pane edu mazhinji maodhiresi uye chiteshi. Uye pakanga pasina imwe nzira iri nani yekuburitsa iyo Stream Yemahara zvemukati pane naHoward mangwanani ano. '
Teerera kuna SiriusXM mahara pane yako iOS kana Android chishandiso kuburikidza naMay 15
Kana iwe uine iOS kana Android foni kana piritsi, enda kune yako mobile browser uye nyora muSiriusXM.com. Bhura pasi pasi kune chikamu chechiratidziro kwachinoti 'Stream Mahara kuburikidza naMay 15,' uye tora pabhokisi rinoti 'Start Streaming.' Tevedza zvinokurudzira zveyedzo yemahara kuti umise account Kana izvo zvapera, isa yakakodzera SiriusXM app pane chako chishandiso ( ios : Android ) uye kusaina mukati uchishandisa zita rekushandisa uye password combo iwe yauchangomisa.
Mimwe migero yaungade kurangarira inosanganisira:
Beatles Channel (18)
Kutenda Vakafa (23)
Unogona kutarisa iro rese gwara gwara rinowanikwa yenhengo dzekuyedza online. Kana iwe usiri kukanzura kutongwa pamberi paMay 16, iwe & apos; uchabhadhariswa $ 8 pamwedzi yebasa.
Imwe sosi yekuburitsa odhiyo zvemukati ndeye Radio.com app iyo yemahara uye inogona kuiswa kubva kuApp Store uye iyo Google Play Chitoro . Pano iwe & apos; uchazowana dzinoverengeka nhepfenyuro dzemuno dzakadai seNew York City ese-nhau nhepfenyuro WCBS 880 uye WINS 1010. Kune zvekare mimhanzi yemuno nenzvimbo dzemitambo-hurukuro dzinogona kuratidzwa.
iphone 11 pro max yakakosha
Iyo yakanakisa Pokémon Go yekutevera uye radar maapplication e iPhone yako
Apple iPad mini 2 neGoogle Nexus 7
Yakanakisa iPhone 11 Pro, 11 Pro Max kesi
Microsoft neAmazon vanobatana nemauto kuunza maapplication eApple kuPC yako neWindows 11
Sprint 5G network yekuvhara mepu: ndeapi maguta akafukidzwa?